पोखरामा हत्या गरिएकी नेहा मगरसँग केकी अधिकारीले माफी मागिन् - Himalayan Kangaroo
पोखरामा हत्या गरिएकी नेहा मगरसँग केकी अधिकारीले माफी मागिन्
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ माघ २०७२, शनिबार १५:११ |
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रकी नयाँ पुस्ताकी नायिका केकी अधिकारीले गत मंगलबार पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ की योरुना अर्थात नेहा मगरको हत्या भएकोप्रति क्षमा मागेकी छिन् । आफ्नै घरबाट चार सय मिटर पर फालिएकी मगर फिल्मकी अभिनेत्री समेत रहेकी नेहाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ । उनले ‘गाउला’, ‘युँपा’जस्ता मगर भाषाका फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् ।
फेसबुकमा नायिका केकी अधिकारीले योरुनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेहाको हत्याले आफूलाई पनि यो समाजको छोरी भएर जन्मेकोमा पछुतो लागेको भावना अभिव्यक्त गरेकी छिन् । केकी लेख्छिन् :
यो पोस्ट लेखिरहँदा म आफूलाई एकदम लाचार अनि विवश महशुस गरिरहेकी छु । हरेक दिन जस्तै हामीले भोग्नुपरेका यस्ता घटनाले मलाई विचलित बनाउँछ । एक्लै कतै हिँड्न डर लाग्छ, पुरुषका हुल कतै देख्दा अर्कै बाटो खोज्न थाल्छु म ।
साँझ पर्ने बितिकै घर पुगिन भने आमा आत्तिन थाल्नुहुन्छ । बेलुका हिँड्नु ठिक होइन भन्नुहुन्छ । विचरा ! आमा न हो छोरी को माया भैहाल्छ । छोरीको बलात्कार, अझ सामुहिक । अझ त्यसमाथि हिंंस्रक हत्याको समाचार छापिँदा कुन आमाको मन बिक्षिप्त नहोला र ?
तर म प्रश्न गर्न हिच्किचाउँदिन आमासँग र सोध्छु, आमा मैले किन डराउनुपर्ने ? मैले त कसैको केही बिगारेको छैन ?
तब आमा भन्नुहुन्छ तिमी छोरी मान्छे हौ तिमीले सधैं डराउनु पर्छ । यहाँ समाज परिवर्तन होला, सोच परिवर्तन होला भनेर म मेरी छोरीलाई खतराको मुखमा पु¥याउन सक्दिन भन्नुहुन्छ।
हुन पनि हो, जति कराए पनि जति रोए पनि जति नै बिन्ती गरे पनि त्यो राक्षसीपन, अनि त्यो बर्बरता देखाइहाल्दा रैछन् । म थाकेर चुपचाप आमाको कुरा मानेर चाँडै घर आउनुबाहेक केही गर्न सक्दिन।
मलाई माफ गरिदेइ बहिनी नेहा पुन। तिमीमाथि भएको घटनालाई लिएर यहाँ जति नै कराऔं, दोहोरि नै रहनेछन् । जति चिच्याए पनि आवाज दबाइनेछन् ।
Previousकिन कमजोर भयो मधेसी मोर्चाको आन्दोलन ?
Nextपत्रकार रामचन्द्र सिलवाल धादिङ ३ बाट काँग्रेस प्रतिनिधि चयन
सेक्स भिडियो लिक भएपछि सोनाक्षी सिन्हलाई तनाव
१४ असार २०७२, सोमबार १२:११
हलिउड अभिनेता मार्क मृत भेटिए, आत्महत्या गरेको अनुमान
१७ माघ २०७४, बुधबार ०७:४२
अष्ट्रेलियाको नेपाली डान्स ग्रुप द नेक्स्टको पपुलरिटी बढदो
५ मंसिर २०७३, आईतवार ०५:२४
आज साँझ मेलबर्नमा कर्णदास मेलोडियस लाइभ
१२ बैशाख २०७३, आईतवार ०१:४०